२ बलमा जित र आलमको १० विकेटको विश्व किर्तिमान कसरी संभव भएको थियो ?
२०७६ चैत्र २१ , शुक्रबार ११:०४ मा प्रकाशित
विश्व क्रिकेटमा नेपालले बनाएका अविश्वसनिय किर्तिमान मध्ये एकै खेलमा १० विकेट लिएको र २ बलमा जित निकालेको किर्तिमान तोड्न लगभग अनिश्चित जस्तै बन्न सक्छ । आखीर कसरी यो विश्व किर्तिमान नेपालले बनाएको थियो त ?
सन् २००८ मे २५, विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ५ अन्र्तगत जर्सीमा समुह एको खेलमा नेपाल र मोजाम्बिक प्रतिस्पर्धामा थिए । खेलमा टस जितेको मोजाम्बिकले पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले व्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा ७ विकेट गुमाएर २ सय ३८ रनको सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो । ज्ञानेन्द्र मल्लले ७१ रन बनाएको ईनिङसमा पारस खड्काले ४४ र शक्ति गौचनले ३४ रन बनाएका थिए । स्मरणीय रहोस त्यसबेला शक्ति गौचन चौथो क्रमका ब्याट्सम्यानका रुपमा रहेका थिए । बिनोद दासको कमानीमा रहेको नेपालका लागि मेहबुब आलमले अबिजित २३ तथा बसन्त रेग्मी र महेश क्षेत्रीले समान १६ रन बनाएका थिए । मोजाम्विकले २४ रन अतिरिक्त दिएको थियो ।
२ सय ३९ रनको विजयी लक्ष्यका साथ उत्रिएको मोजाम्बिक १४ दशमलव ५ ओभरमा १९ रनमा समेटिएको थियो । शुन्य रनमा पहिलो विकेट गुमाएको मोजाम्विकले १ रन जोड्दा दोस्रो विकेट गुमाएको थियो । ६ रनमा तेस्रो, ८ रनमा चौथो, ९ रनमा पाँचौ र १२ रनमा छैठौ विकेट गुमाएको मोजाम्विकले १९ रनमा सातौ देखी दशौ विकेट गुमाएको थियो । विपक्षीको १० विकेट लिएका मेहबुव आलमले ५ ब्याट्सम्यानलाई बोल्ड गरेका थिए । ४ जनालाई एलबिडब्लु र एक ब्याट्सम्यानलाई विकेट किपर महेश क्षेत्री हातबाट स्टम्पिङ गराएका थिए । खेलमा नेपालले किर्तिमानी २ सय १९ रनको जित निकाल्दा त्यो भन्दा ठुलो किर्तिमान मेहबुव आलामले राखेका थिए ।
सन् २००६ अगष्ट २० मा ओमानको क्लब अमानमा एसीसी ट्रफि अन्तर्गत नेपालको प्रतिस्पर्धा म्यानमारसंग रहेको थियो । खेलमा टस जितेको नेपालले म्यानमारलाई ब्याटिङको निम्ता दिएको थियो । पहिलो बलमै विकेट गुमाएको म्यानमारले १० दशमलव १ ओभरमा १० रन जोड्दा सम्पुर्ण विकेट गुमाएको थियो । पहिलो ओभरमा पहिलो र पाँचौ बलमा विकेट लिएका मेहबुब आलमले ६ दशमलब १ ओभरमा ७ विकेट हात पार्दा ४ ओभर बलिङ गरेका बिनोद दासले ३ विकेट चट्काएका थिए । सुरुवाती २ विकेट बिना स्कोर गुमाएको म्यानमारले ४ रनको स्कोरमा तेस्रो विकेट गुमाएको थियो । चौथो विकेट पनि ४ रनकै स्कोरमा गुमाएको म्यानमारले ७ रन बनाउदा पाँचौ र छैठौ विकेट खेर फालेको थियो । ८ रनमा सातौ, ९ रनमा आठौ रन गुमाएको म्यानमारले १० रन जोड्दा पछिल्ला २ विकेट गुमाएको थियो । नेपालबिरुद्ध म्यानमारका ५ खेलाडीले मात्र एक रनको स्कोर बनाएका थिए । ५ रन नेपालले अतिरिक्त प्रदान गरेको थियो । उसका ६ ब्याट्सम्यान खातासम्म नखोली पभेलियन फर्किएका थिए ।
११ रनको लक्ष्य नेपालले मात्र २ बलमा बिना क्षती भेट्टाउदै किर्तिमान कायम गरेको हो । महेश क्षेत्री र दिपेन्द्र चन्दले एक एक बलमा समान ३ रन बनाउदा बा“कि ५ रन नेपालले अतिरिक्त रनका रुपमा प्राप्त गरेको थियो ।
यो किर्तिमान कुनैपनि मुलुकले तोड्न त के कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने किर्तिमान हो । तर आईसीसीको नभई एसीसीको प्रतिस्पर्धा भएकाले यसलाई आईसीसीको मान्यता भने छैन् ।
कोपा ईटालिया अर्को साता सुरु हुने